AKHRISO: Xog Laga Qoray Nin ka Sheegta Xoghayaha Ururka Nusoj. – Kismaayo24 News Agency
AKHRISO: Xog Laga Qoray Nin ka Sheegta Xoghayaha Ururka Nusoj.
by admin 23rd May 2018 033
Muddo badan ayaa waxaa uu khilaaf ka taagan yahay hogaanka Ururka Suxufiyiinta Qaranka Somaliyeed ee Nusoj taas oo ay isku heystaan Laba Nin oo mid walba uu Sheeganayo in uu yahay xog’hayaha Ururka Suxufiyiinta qaranka Somaliyeed ee NUSOJ .
Labadan Nin ayaa lagu kala Magacaabaa Mohamed Ibrahim Mo’allimow iyo Sidoo kale Omar Farouq Osmaan ,waxaana taas ay keentay in Khilaaf xooggan oo dhanka fikirka ah uu soo dhexgalo Wariyaasha inkastoo ay cadahay qofka inta badan ay taageersan yihiin Wariyaasha.
Xilkan ah Xog’hayaha Ururka Suxufiyiinta Qaranka Somaliyeed waxaa horay u hayay Cumar Faaruuq ,waxaana xilkaas uu Cumar hayay muddo badan laakiin markii uu waqtigiisii dhamaaday ayaa Cumar waxaa uu diiday in la qabto doorasho oo uu isagana isasoo Sharraxo si u dhacdo Doorashada Ururka NUSOJ.
Wariyaal badan ayaa ka kala yimid Dhammaan Gobalada kala duwan ee Somalia waxaana Doorasho guud oo ku aadan hogaanka NUSOJ lagu qabtay Muqdisho Cumarna wuu diiday in Doorashadaas uu ka soo qeyb galo.
Doorashadaas oo Dhammaan Wariyaasha Somaliyeed ay ka soo qeyb galeen ayaa waxaa lagu soo doortay Maxamed Ibrahim Macallimow oo loo doortay in uu yahay Xoghayaha Ururka Suxufiyiinta qaranka Somaliyeed ee NUSOJ.
Sidoo kale Gudoomiyaha Uruka NUSOJ waxaa loo doortay Maahir Jaamac Aadan ,waxaana doorashadaas ay aheyd mid ay ku mideysnaayeen dhammaan Wariyaasha Somaliyeed.
Waxaa Xusid mudan Cumar oo Sheeganaya NUSOJ in Urukiisa uu san laheyn Gudoomiye iyo Maamul kale oo isaga ka hooseeyo ,isaga ayaa wax walba isku ah ,taas waxa ay cadeyneysaa in Cumar uu yahay nin xoog ku heysta Magacan NUSOJ ,inkastoo uu hiilo ka helayo Rag caddaan ah oo la shaqeyta.
Dhinaca kale NUSOJ-ta Saxda ah ee uu Xog’hayaha rasmiga ah ka yahay Macallimow ayaa ah mid u shaqeysa qaab Urur ahaan ah sababtoo ah waxaa ay ledahay Xubnihii Gudiga fulinta iyo Xubnaha Gudiga Shuurada.
Cumar iyo kooxo yar oo dhaqaale doon ah ayaa la shirtaga in ay yihiin Ururka NUSOJ laakiin taas waxaa ka soo horjeeda dhammaan bahda Saxaafadda Somalia.
Cumar Faaruuq waxa ay NUSOJ u tahay meel uu ku adeegto oo uu sidoo kale ka helo fiisooyin dibadda ah oo uu ka gato dad iyagu doonaya in ay wadanka isaga tagaan.
W/Q/ Yusuf Cumar Nuunow
Guddiga Gurmadka Fatahaadaha oo ka Sheegay xilliga la gaarsiinayo lacagtii loogu deeqay Dadka.
Sawirro: Deeq Lacageed oo gaareysa 50 Milyan oo Gani oo Jarmalka ay ugu deeqday Soomalia
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo dhagax dhigay xarunta Golaha Wasiirada Hirshabelle